Antilles Frantsay: Fanontaniana momba ny mari-panondroana sy ny tsy fananan’asa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Oktobra 2018 13:03 GMT
Manontany ny mari-panondroana any am-pielezana
Tino Land, nosoratan'ilay bilaogera Martinikàna monina ao Paris manasongadina ny disadisa misy indraindray eo amin'ny Afrikana sy Karibeana Frantsay, mitsikera ny Frantsay Antilliana mitsipaka ny fototra maha-Afrikana azy ireo sy Afrikana milaza fa “namidy” tamin'ny kolontsaina Tandrefana ny Antiliana:
Alikaiko ireo Antiliana rehetra manambany an'i Afrika na mieritreritra fa tsy misy ifandraisany aminy izy ireo, na dia niorina avy amin'ny Afrikanina aza ny ampahany betsaka amin'ny kolontsaina antilliana, na sakafo, mozika, zavakanto, na soatoavina. Ambonin'izany, ny fehezan-teny amin'ny teny kreôla dia tena akaiky kokoa amin'ny fiteny Afrikana izay avy amin'ny Afrikana mihitsy ny sasany amin'ireo teny… Ry rahalahiko, fantaro fa rehefa manambany an'i Afrika ianao, dia manambany ny razambenao, izany hoe ampahany aminao.
Alikaiko ihany koa ireo Afrikana milaza fa voavidy na Bounty ireo Antiliana na dia any Afrika aza no betsaka manala ny lokom-batany ny vehivavy, mba hilazana fa tsara tarehy kokoa izy ireo. Ankoatra izany dia maro amin'ireo olona any Afrika no manana anarana tandrefana izay tsy ampiasaina intsony any Frantsa, ohatra: Boniface, Alphonse, Hortense, Pierrette, Basile, Hyacinthe … ary maro hafa. Noho izany, araka ny lazain'ny ohabolana Ivoariana, “Jereo ny atin'akanjonao alohan'ny hilazana fa maloto ny mpifanolobodirindrina aminao” … eritrereto izany.
Ny CPE: Lalànan'ny Asan'ny Tanora ao Frantsa, Araka ny hita avy ao Guadeloupe
Mangoraka kely ho an'ireo mpianatra Frantsay izay nanao hetsi-panoherana ny Fifanekena Asa Voalohany (Contrat Première Embauche (CPE)) i Bien vu, lalànan'ny asa izay, ankoatra ny hafa, ahafahan'ny orinasa manakarama mpiasa latsaky ny 26 taona tsy mila mampiseho antony.
Ry tanora mpianatra ampihantain'ny ray aman-dreniny! Androany, manana safidy ianareo: andeha mivantana any amin'ny Sampan'Asam-pirenena (ANPE) ary lasa tsy an'asa fa miverina amin'n CAP (diploma fianarana ambaratonga faharoa ho an'ny mpiasa) mba hahafahanao miditra amin'ny filan'ny tsena na ” mizàka” ny CPE (Fifanarahan'asa voalohany), manome anao ny fahafahana hanaporofo amin'ny mpampiasa anao fa tena mpiantsehatra ilaina ao amin'ny orinasany ianao. Mifidy ny: Tsy mila CPE ianao! [ary miaraka amin'izany] azo antoka ny tsy fananan'asa, ny fotoana vonjimaika maharitra, ny fanontaniana indray ny tena ary ny tena zava-dehibe indrindra, ny fahafahana hampandroso ity tolona lehibe mankany amin'ny asa azo antoka ity. Moa ve tsy mahafinaritra ity taranaka vaovao ity izay ho lasa mpilalao fototra amin'ny fiarahamonintsika vaovao? Misy fanantenana! Ny lojikany tsy misy indra-fo: Vonoy ny “alika” ary andeha hiresaka avy eo raha tokony ho notazonintsika velona izy!
Nofoanan'ny governemanta Frantsay, niondrika nandritra ny herinandro maromaro tamin'ny hetsi-panoherana nataon'ny tanora, mpianatra, sendikà ary ny hafa manerana ny firenena ny lalàna, ka nahatonga an'i Bien vu hanatsonga fa nisy antoko politika Frantsay vaovao teraka: “Ny Lalana”:
Vao naneno ny lakolosim-pahafatesan'ny CPE, natao tao anaty fifaliana sy endrika falifaly ny lanonana manetriketrika raha nitomany kosa ny sasany mahita fanantenana kely vaovao amin'ny fitadiavana asa. Ary eny, nisy antoko politika vaovao teraka, izay nantsoiko hoe: “NY LALANA!” Fahefana matanjaka tantanin'ny tanora izay efa mahafantatra ny zava-drehetra momba ny tontolon'ny asa ary manome lesona amin'ny governemanta eo amin'ny fitondrana.